Ergaygga Qaramaada Midoobay oo ku baaqay in dulqaad iyo Xasilooni laga muujiyo arrimaha Gobolka Sool • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ergaygga Qaramaada Midoobay oo ku baaqay in dulqaad iyo Xasilooni laga muujiyo arrimaha Gobolka Sool
Ergaygga Qaramaada Midoobay oo ku baaqay in dulqaad iyo Xasilooni laga muujiyo arrimaha Gobolka Sool
Posted: Khalid Yusuf - April 16, 2014
“Waxaan ku baaqayaa in la muujoy dheganaansho. Xaaladda laguma xalin karo hab ciidan. Dhamaan dhinacyada ay arrintu khusayso waa in ay muujiyaan dulqaad, kuna kicin ficil keeni karo dagaal. Waana in ay sida oogu dhakhso badan u damiyaan buuqa jira/ ama u qaboojiyaan xaaladda. Waana in ay ku xalliyaan arrimahoodda si ay ku dheehantahay xasilooni, nabad iyo isu tanaasulid.
Dadka Soomaaliyeed way soo dhibtoodeen in kufilan, waxayna ogyihiin in wax wanaag ah aan lagu gaareeynin dagaal iyo amni la’aan. Xafiiska UNSOM iyo Bulshada Caalamka ayaa labaduba ku baaqaayo in la muujiyo dulqaad aad u weyn. Waxaan diyaar u nahay inaan dhinacyada ka taageerno wixii dhexdhexaadin ah” ayuu yiri Egreyga Gaarka ah.